HUNDA DURA, BIYYAA FI UMMATA KIYYAAF !!!!!! | Oromo Freedom News and Views
← Garaagarummaa Bilisummaa Biyyaa fi Ummataa – Yaada Ifsa ADO Irratt Kenname
Manni hidhaa tokko yoo diigame malee deebi’anii keessatti hidhamuun hin hafu →
Bitootessa 31, 2013
Biyyoonni har’a gurguddatanii addunyaa bulchaa jiran kun, adeemsa siyaasa keenyaa waan nu qofa keessatti umame taasifnee , waan hunda keessaa of baafnee harka marannee akka teenyu nu taasise keessa akka dabran seenaa isaanii tarrisuu dandeenya. Lammii Ameerikaa ykn Faransaayi tokkon Biyyi kee eessa ? yoo jedhaniin deebiin isaanii Maqaa Biyya isaanii waamu malee , bakka itti dhalatan hin waaman. Ummata isaaniis yoo gaafataman akkasuma . keenyatti yoo deebine har’a fooyyee qabaatus , Ejjannaa BIYYAA FI UMMATA dursa kenninuuf sana irratti dhiibbaa taasisee nu miidhaa jiraachuu argaa jirra. Waggaa 150 boodallee nu rakkisaa jira. Diinnis karuma kana nu seena. Kana cufachuun ni danda’ama. Kan cufu dhaaba ykn humna biroo odoo hin taane, dhalli Oromoo of irraa eegalee ykn of qulqulleessuu eegaluun ta’a. Biyya ykn Ummata dursa kennuuf yaannus“Oromiyaa fi Ummata Oromoo” isa jedhun xumura itti laachuu barbaachisa.
Obaamaan dhuunfaatti waan kanaaf murtii laadhaa odoo jedhamanii akka har’aa kana namni osoo dhumu waliin haasa’aa kan jedhan natti hin fakkaatu. Bakka jirantu Biyyaa fi Ummata isaaniif dursa kennu taate , waan jedhan jedhanii deeman. Obaamaan akka jedhanitti , “isin Mootummaa mataa keessanii dhaabbattanii akka jiraattan ni feena. Kun mamii hin qabu . garuu Israa’ee waliin haas’auu qabdu . kun walii galtee lameen keessan irratti hundaa’aa ” jedhan . itti fufanii ammo“isin, garee abbaasiin jechuu isaanitii, isin HAMAAZIN balaaleffachuu qabdan. Hamaaz terarstiidha. Inni odoo jiru akkamiin dhimmi keessan hiikama. Israa’eeliin kaleessallee bombin reeba. Kun furmaata hin ta’u. kanaaf Ummati Filtsixeem HAMAAZIN balaaleffachuu qaba”jedhan.
Posted on 01/04/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink.	1 Comment.
Bilal kedir | 02/04/2013 at 3:43 am
Nuti Ummani Oromoo sila hanga yoomii teenye bilisumma dha jenna. Wanti gochuu qabnu tokko taane dammakqnee harka wal qabanee gara dalagati jijjiruu dha. Rabbin nu haa bilisoomsu.